11ka ugu sareysa ee ah waxyaabaha aadan ku hayn qolkaaga jiifka, ka jooji sidan
Waad salaaman tihiin sandwicheska yar ee cusub. Freshness, freshness, waxaan kuu sheegayaa taas, laakiin runti maahan erayga freshness oo maskaxdaada ku soo dhaca inta badan markaan urinayo carafta ka socota qolkaaga. Iyo sabab macquul ah, waxay uraysaa dawacadii hore ee musty ee meesha ku jirtay. Ma sakhraamaysaa? Ha walwalin, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa badbaadino qaskaan, maxaa yeelay ur ama ha diidin, waxaa jira waxyaabo badan oo aad doorbidi laheyd inaadan uga tagin qolkaaga.
Ka dib markaad sameyso waxaad rabto.
Laakiin waan kuu digi doonaa.
Ha dhihin inaadan aqoon.
1. Kabahaagu si fiican ayey u deg yihiin '
Macno ayey samaynaysaa, laakiin mar labaad ayaan nidhaahnaa. Haddii aadan u baahnayn inaad ahaato nadiifiye nadaafadeed oo aad kabahaaga ku hayso meel kasta oo gurigaaga ah, weli waxaan kugula talineynaa inaadan uga tagin walxahan wasakhda ah ee eyga iyo qoolleydu ka buuxaan oo jiifa oo waraabowga la jiifa sariirtaada sariirteeda.
2. Alaarmiga taleefankaaga ka digaya
Muddo toban sano ah, ayaasuuqa saacadda alaarmiga ayaa dhacay. Si cadaalad daro ah loogu badalay ringtone-ka taleefannada casriga ah. Taasina waa wax laga xishoodo maxaa yeelay run ahaantii waxaan ka fiicnaan lahayn inaan ka tagno taleefankeena sariirta iyo sariirta aan seexanno. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in ay kugu soo xirayso lagamamaarmaan, waxay umuuqataa in digniinta taleefanka ay sababaan walwal ka badan inta kale. Iyo xitaa inaan haysanno talooyin fara badan oo
ah oo subixii lagu kici karo markaa ha iska dhigin inaadan aqoon.
3. Sawirada qoyskaaga
Ma aqaano inaad ka mid tahay dadka cajiibka ah ee ku ilaaliya sawirada qoyska (oo ay ku jiraan dadka dhintay) goobtooda habeenkii laakiin ogow inaysan aheyn feng-shui. U adkaysiga muuqaalka awowayaashaa intaad hurudid waxay noqon kartaa mid walaac leh waxayna kugu adkaanaysaa inaad hurudo Hagaag markaa, ha ciyaarin naftaada, waa maxay waxa jilicsan ee kaa hortaagan inaad seexato agteeda sawirka hooyadaada tuurista?
4. Qalabkaaga loogu talagalayCiyaaraha isboortiga
Horeba maxaa yeelay rowerku wuxuu qaadaa boos. Oo maxaa intaas ka sii badan, waa wax fool xun. Taasi waxay tiri, haddii aadan dhadhamin oo aad leedahay guibolles ay ka buuxaan Savoyard fondue, waxaan kugula talineynaa halkii aad ku dhajin lahayd aaladda qolka fadhiga ama qol kasta oo aan qolka jiifka ahayn (iyadoo ku xiran dabcan dusha gurigaaga, waan ku dhiirranayaa inaad rajeyneysid inaadan qorsheyneyn inaad ku dhex darto rowerka qolka 9m²).
MAXAA SABAB AH Qalabka isboortiga wuxuu leeyahay ujeedo nasiib daro ah oo kaa dhigeysa inaad dareento dambi markaad fiiriso maxaa yeelay inta badan ma isticmaashid. Marka sidaa darteed, inaad dareento dambi habeenkii markaad seexanaysid ama subaxdii markaad toosto maxaa yeelay waligaa uma adeegsan tababarahaan aqoonta leh uma fiicna fayoobaantaada ruuxiga ah.
5. Goobtaada shaqada
Iyada oo loo yaqaan 'Covid' (xanuun yar oo isbadal ku yimid noloshiisa dhowr bilood hada, hadii aad maqashay warqada) iyo shaqada teleefonka ee la socota, anagaDhammaan waxay ahayd inay dib u naqshadeeyaan meelaha aan ku nool nahay si aan u dhexgalno xarun (mowduucaan, waxaan kugula talineynaa xulashada
aaladaha lagama maarmaanka u ah isgaarsiinta xasilloonida ), laakiin si ka duwan, ka shaqeynta kombiyuutarkaaga qolkaaga laguma talinayo dhan. Shaqada taleefanka ee wanaagsan, waxaa lagugama maarmaan ah inaad kalasoocdo meelaha nasashada iyo kuwa aad xooga saartid. >
6. Buugaagta aadan wali aqrin
Aynu runta uhadalno, khaanadahayagu waxay ku badan yihiin buugaag aanan wali aqrin (dhamaan buugaagta Marcel Proust) marka loo eego buugaagta 'aan aqrinay ( Tom-tom iyo Nana). Hagaag, buugaagtaan aan balanqaadayno inaan aqrino mudo 12 sano ah waxay wataan dambi qoto dheer: waligaa ma aqrin. Iyaga oo ku haaya sariirtaada dhinaceeda waxay dib noogu celinaysaa gelitaankaas aasaasiga ah ee guuldarada.
Markaa laba xal oo suurtagal ah:
- dhaqaaji buugaagtaas oo xambaarsan dambi aad u tiro badan.
- akhri iyaga.> 7. Kuleylka
Xitaa haddii ay tahay mid aad u qabow, waa wax aan la arki karin in la diiriyo qolkaaga, ugu yaraan aan ka badnayn 17 ° C. Tani waa sababta aan guud ahaan kugula talineyno inaadan uga tagin kuleylka qolka. War wanaagsan, waxay kuu badbaadin doontaa
8. Dibi si loo cunteeyo
Inaad haysato keega, jibbaarada ama shukulaatada gacanta marka aad sariirta jiifto waa fikradda ugu xun adduunka (ka dib bamkii nukliyeerka). Uma baahnid inaad ahaatid Einstein si aad taas u ogaatid (Miyaad qiyaasi kartaa haddii Einstein uu daahfurkaas sameeyay halkii uu ka noqon lahaa xidhiidh)?
In kasta oo ay tahay mid duufsan in muruq xanuun sariirta agteeda sariirta lagu daawado filimada iyo silsiladaha ilaa iyo hada, si xoogan ayaa loo niyad jabiyaa. Horeba maxaa yeelay waxaad ka quusaneysaa noloshaada galmada (haddii aad haysato mid la heli karo), laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, waa habka ugu wanaagsan ee lagu dilo hurdadaada. Ma ogi haddii aad taqaanno fikradda ah "XAARAANDHAGAXA SHAQADA LABA SAACAD KA HOR INTA AAN HurUDIN ”laakiin TV-ga ayaa iska cad inuu ka mid yahay.
ok isagu waa cute, ok wuu isku duubay, ok wuu nadiifiyaa waxayna kaa caawinaysaa inaad hurudo. Laakiin dhammaan milkiileyaasha bisadaha ayaa kuu sheegi doona: kuwan been abuurka ah ayaa kugu ridi doona riyo habeen kasta. Taasi waa sida ay tahay, bisaduhu waxay ka dagaalamaan qaddarkaaga hurdo waxayna yeelan doonaan jahwareer 4 subaxnimo, 6 subaxnimo, 7 subaxnimo, ka hor inta aysan si fiican ugu seexan hurdada subaxa 5 daqiiqo ka hor intaan alaarmigaaga la bixin. >
11. Bomka loo yaqaan 'Napalm Bomb' In kasta oo la iskudayo, walxaha noocan ah laguuguma talin karo sariirtaada agteeda gebi ahaanba, badanaa sababaha bilicsanaanta.
Ilaha: Brightside , Madmoizelle